Mumoyo weNSW nyika yemarasha, Lithgow anotendeukira padenga rezuva uye Tesla bhatiri kuchengetedza
Lithgow Kanzuru yeGuta iri smack-bang mukati gobvu reNSW nyika yemarasha, dzakakomberedza dzakazara nenzvimbo dzemagetsi dzemarasha (mazhinji acho akavharwa). Nekudaro, iko kusachengetedzwa kwezuva uye simba rekuchengetedza kumagetsi kudzimwa kunounzwa nenjodzi senge moto wemusango, pamwe nezvinangwa zveKanzuru munharaunda, zvinoreva kuti nguva dziri kuchinja.
Lithgow Kanzuru yeKanzuru ye74.1kW sisitimu iri pamusoro peKutonga Kwekuvaka iri kuchaja 81kWh Tesla bhatiri simba rekuchengetedza system.
Beyond the Blue Mountains uye mukati memwoyo weNew South Wales nyika yemarasha, pasi pemimvuri yekupfupisa kwenzvimbo mbiri dzepedyo dzemagetsi dzemarasha (imwe, Wallerawang, ikozvino yakavharwa neE EnergyAustralia nekuda kwekushaiwa kwekudiwa), Lithgow City Council iri kukohwa mibairo ye solar PV uye matanhatu Tesla Powerwalls.
Kanzuru nguva pfupi yadarika yakaisa iyo 74.1 kW system pamusoro peDziviriro yayo Chivakwa kwainoshandisa nguva yayo kubhadharisa iyo 81 kWh Tesla simba yekuchengetedza sisitimu kuti igone kuita kwehutongi husiku.
"Sisitimu iyi ichaona zvakare kuti chivakwa chehutungamiri chekanzuru chinokwanisa kuramba chichishanda pakaitika magetsi," akadaro Meya weLithgow City Council, Kanzura Ray Thompson, "iyo inotaura nezvekuvandudzwa kwebhizimusi kuenderera mberi munguva dzekukurumidzira."
81 kWh yakakosha yeTesla Powerwalls yakabatana naFronius inverters.
Ehezve, mutengo haugone kuiswa mukuchengetedzeka mumamiriro ekukurumidzira. MuAustralia mese, kunyanya munzvimbo dzinotyisa moto (saka, zvakanyanya pese pese), nzvimbo dzinokosha dzebasa rekukurumidzira dzave kutanga kuona kukosha kwezuva uye simba rekuchengetedza zvinogona kupa kana magetsi abuda nemoto wakapararira.
Muna Chikunguru gore rino, Malmsbury Fire Station muVictoria yakawana 13.5 kW Tesla Powerwall 2 bhatiri uye inoteedzana nesolar system kuburikidza nerupo uye mari kubva kuBank Australia uye neCentral Victorian Greenhouse Alliance's Community Solar Bulk Buy program.
"Bhatiri rinovimbisa kuti tinokwanisa kushanda nekupindura kubva panzvimbo yemoto panguva yekudzimwa kwemagetsi uye inogona zvakare kuva nzvimbo yenharaunda panguva imwe chete," akadaro Malmsbury Fire Brigade Captain Tony Stephens.
Kuti chiteshi chemoto pari zvino hachichinjike kudzimwa kwemagetsi, Stephens anofara kuziva kuti panguva dzekubatika uye nedambudziko, "nhengo dzemunharaunda dzakakanganiswa dzinogona kuushandisa mukutaurirana, kuchengetedza mishonga, chikafu chefriji uye internet mumamiriro ezvinhu akaipisisa."
Kuiswikwa kweLithgow Kanzuru yeKanzuru kunouya sechikamu cheKanzuru yeCommunity Strategic Plan 2030, iyo inosanganisira zvishuwo zvekuwedzera uye zvechokwadi kushandiswa kwesimba kwemamwe magetsi, pamwe nekuderedza marasha emafuta.
"Ichi chingori chimwe chezvirongwa zveKanzuru zvine chinangwa chekuvandudza mashandiro nesangano," akaenderera mberi Thompson. "Kanzuru neHurumende vanoenderera mberi nekutarisa kune ramangwana uye kutora mikana yekuvandudza uye kuyedza chimwe chinhu chitsva mukuvandudza Lithgow."